Iyo yekumesa emulsifying unguent muchina inowanzo kuverengerwa hombe hari, mvura poto, mafuta poto, filler bin, kusanganisa system, kutonhora system, vacuum system, jacking system, contrl system uye rack chikuva.
Hupenyu hwakareba sevhisi.
Injiniya inowanikwa kushandira kunze kwenyika.
Mvura mbishi zvigadzirwa zvinotanga kugadziriswa uye zvakapararira muhari yemvura uye muhari yemafuta, ndokuzopinda mune emulsification bhaira nepombi yekutsvaira; poda mijenya iri mupini yekuzadza nemhepo-sando pazasi peimwe divi, inogona kukanganisa madziro-kuyera uye kuita kuti mapoda aendeswe muhari huru zvachose, kuve nechokwadi chakaringana chiyero chezvinhu zvakagadzirwa. Hupfu inoyamwa mukati mehari huru nevhu remuchina. Iyo yepamusoro- simba rakatsvairwa madziro kusanganisa bhokisi rinovimbisa yakasimba kusangana kweyezvinhu. Iyo yekumhanyisa-inomhanyisa inoenderana inopararira mhete ichapwanya uo izvo zvigadzirwa uye hupfu zvakanyatsonaka. Trace element inlet inoshongedzerwa padivi pehari hombe kuti uvasanganise mune izvo zvinhu pasina marara. Kukuya chigayo kunogona kuiswa muhari imwe sarudzo yekunatsa zvinhu. Munguva yekugadzira, kutonhora kwemvura mujekete kunotonhorera pasi tembiricha, uye matubvu anozobviswa neyekutsvaira defoamation.
Mushonga wemazino, shaving cream, viscous pastes.
Dhizaini vhoriyamu (L)
Isipo inokurudzira simba (kw)
Isipo inokurudzira kumhanya (rpm)
Homogenizer simba (KW)
Homogenizer kumhanya (rpm)
Pombi pombi simba
Inokurudzira simba (kw)
Rondedzero / Zita
Kushanda Kushanda (muhari)
Kurumidza Kuparadza Musanganiswa
Speed ​​Inotenderera: 0-1000r / min
Speed ​​Inotenderera: 0-20r / min
Vacuum Degree mukati mehari
Mvura Mhete Inovhara Pombi （Yepombi Yekudhira -0.096MPa）
Miganhu, Kureba * Upamhi * Kureba） mm
Usati wavhura butiro:
Mushure mekuvhura butiro:
Zvemagetsi kudzora system
Push bhatani kutonga
Pashure: Pefiyumu Inotonhora Sefa
Zvadaro: Reverse Osmosis Kurapa Midziyo